Burmese/Myanmar General Elections, Nov 7th 2010 – Poll | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » Burmese/Myanmar General Elections, Nov 7th 2010 – Poll
Burmese/Myanmar General Elections, Nov 7th 2010 – Poll
Posted by kai on Nov 4, 2010 in 2010/2012/2015 Election | 17 comments
Burmese/Myanmar General Elections Nov 7th 2010
မန္တလေးဂေဇက်သည် လူထုကို ဘယ်တော့မှ တပါတ်မရိုက်..။
မဲပေးသူများကို မှတ်တမ်းမတင်ထားပါ။ မန်င်ဘာမဟုတ်သူများလည်း လုပ်ပေးကြစေလိုပါတယ်။
တခါဖြေ တခုနှုန်းနဲ့ မိဘဆွေမျိုးမောင်နှမ ကိုယ်စားပါ ၀င်ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ Poll က ၅မိနစ်တခါ ပြန်ပွင့်မှာမို့ ပါ။
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်လောက်ဆို အဖြေထွက်နေမှာ ဖြစ်တာမို့ မန္တလေးဂေဇက်ပရိသတ်က မြန်မာလူထုကို ဘယ်လောက်ကိုယ်စားပြုနိုင်သလဲ ပေါ်လွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွင်းထဲက ဟာတွေက ခုံနေရာတွေပါ..။
ပထမတခုက (ပြည်သူ့လွှတ်တော်)၊ ဒုတိယက (အမျိုးသားလွှတ်တော်) ထိုင်ခုံနေရာတွေပါ..။
ဆိုင်ရာပါတီတွေ ၀င်ပြိုင်ထားတဲ့ ခုံနေရာဆိုပါတော့..။ သိပ်တော့ မပြည့်စုံသေးပါဘူး..။
အင်တာနက်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေထဲ နည်းနည်းပါးပါး မွှေနှောက်လိုက်ပါဦးမယ်..။ ပြီးမှ ရတဲ့အချက်အလက်တွေ လာရေးပါမယ်..။ သိချင်တာတွေ ရေးချင်တာတွေ။ ဆဲချင်တာတွေ … အောက်မှာ ကော်မန့်နဲ့ မန်းနိုင်ပါကြောင်း..။
အချက်အလက်များ ( http://www.myanmarelection2010.info http://www.networkmyanmar.org
ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးရှိ လူဦးရေစုစုပေါင်း – ၅၇,၅၀၄,၃၆၈ (၂၀၀၈)
ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ – ၂၇,၃၆၉,၉၅၇ (၂၀၀၈)
ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း – ၄၉၈
1. ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် – ၃၃၀
2. အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် – ၁၆၈
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်(လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း) – ၁၁၀+၅၆ = ၁၆၆
ခွေးမသား ယှဉ်ပြိုင်အမတ်လောင်းတွေ မင်းတို့ အဖေ ကြက်ဖွတ်ဘဲနိုင်လိမ့်မယ်ကွ
ငါးမိနစ် တခါ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ လူ လာလာ နိပ်ရင်.. ဒီမှာ အများကြီး တက်သွားနိုင်တယ်.. ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် မကောင်းတော့ မကောင်းဘူး
လီးကောင်းတွေ ဒီကြံ့ဖွတ်ပဲနိုင်မှာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမပေးဘူ အကုန်လုံးကိုဆန့်ကျင်မယ် သပိတ်ပဲမှောက်မယ် ခွေးကောင်းတွေ ဟိုကောင်းတွေရှိသေတယ် ခမောက်ဆိုတဲ့ကောင်းနဲ့ 88ဆိုတဲ့ကောင်း ကော သစ္စာဖောက်တွေ ခွေးသာတွေ ဒါပါပဲနောက်မှထက်ဆဲမယ်
သူတို့ပထွေး နေ၀င်းလမ်းစဉ်အတိုင် လုပ်နေကြတာပါ..။။ မသာကြီးချနဲ့ သေကြရတော့မှာပါ..မကြာတော့ပါဘူး။
အဲ. နေ. ကျ ရင် အိပ် မယ် …. ကြံ့ ဖွတ် ဆို တာ က လူ အ ဖွဲ. အစည်း မ မ ဟုတ် တာ ဘာ လို. မဲ ပေး ရ မှာ လဲ … အ လကား တိရိတ်ဆန် ကျင်. ကျင်. မဲ. ကောင် တွေ .. ဟွန်း
စစ်တမ်းမှာ ကိုယ်ဖြည့်ချင်တာကိုေ၇းတာထက် .. ကိုယ်လုပ်ရမှာကိုေ၇းကြစေချင်တာပါပဲ..။
ကိုယ့်ဘေးက သူတွေလည်း မေးမြန်းပြီး သူတို့လုပ်မှာကို … အဲဒီအတိုင်းဖြည့်စေချင်တာပါ..။
ဒါမှ မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ စာဖတ်သူ၊ စာေ၇းသူတွေဟာ မြန်မာလူထုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မနိုင် ခန့်မှန်းနိုင်မှာမို့ လား..။
နောက် ၃-၄ရက်ဆို အဖြေပေါ်ပြီပဲနော…။
မနေ့ညက အိပ်မက်မက်တာ ကြံ့ဖွတ်က ရှုံးတယ်တဲ့ ဟီး ….. ပျော်လိုက်တာ
ဒီမှာတောင် ကြံခိုင်ရေး အားပေးနေတဲ့ လူတွေ တော်တော် ရှိနေပါလား.. ဒီမှာတော့ ဘယ်သူမှ ဖိအားပေးတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့..
နက်ဖြန် မဲပေးမဲ့ သူတွေ ဆန္ဒအမှန် ဖော်နိုင်ပါစေ။
ဘယ်သူတွေတက်တက် ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်ပြီး လူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့နဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ အဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။
ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်။ ဘင်လာဒင်ကို မြန်မာပြည်ကို သွားအုပ်ချုပ်ဖို့ အကြံပေးလိုက်မယ်။ သူ့မှာ မနောတို့လိုလူတွေ စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်ဖို့ ဒေါ်လာတွေ တထောကြီးရှိတယ်။
မနက်ဖြန် မဲသွားမပေးပဲ မနေကြပါနဲ့ … ဘယ်သူ့မှ မပေးချင်ရင်တောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပယ်မဲဖြစ်အောင် လုပ်သင့်တယ် … နောက်မို့ဆို သွားမပေးလို့ အလိုလို သူတို့ပါတီထဲ ထည့်နေအုံးမယ်
ထည့်မယ် ထည့်မယ် ကြံ့ဖွတ်ကိုယှောင်ပီး ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ချစ်ပီး ပယ်မဲဖြစ်အောင်ထဲ့မယ်… ဟေး ဟေ….
နောက် ၆နာရီလောက်ဆို မန္တလေးဂေဇက် Poll ပိတ်မှာမို့Seven/Eleven Myanmar/Burma Election Prediction -ရေးပေးပါမယ်..။
တခုထူးခြားတာက ပူးလ်မှာပြနေတာအရ ပယ်မဲဆိုတာအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ ပယ်မဲဟာ မဲဆန္ဒပေးတာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပြီး ဆန္ဒကိုထည့်မတွက်(ပယ်)တာသာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်ဟာ အနိမ့်ဆုံးမဲပေးရမဲ့ အရေအတွက်မရှိပဲ မဲတခုရှိရင်ကို အမတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ သတင်းပို့ ထားတဲ့သူရှိနေတာမို့ ပါ။
ကင်မရာ။ လက်ကိုင်ဖုန်းရှိတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက ဘယ်သူမဆို သမိုင်းဝင်ဖြစ်မဲ့ ဆဲဗန်းအီလဲဗန်း (7/11)နေ့မှာ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ဓါတ်ပုံတပုံ (အနည်းဆုံး)ရိုက်ပေးထားကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျ..။
တတ်နိုင်ရင် .. အဲဒီနေ့မနက် မြို့ ထဲဓါတ်ပုံလေးများရရင်လည်း ပို့စေ၊ တင်ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျ..။
မြန်မာပြည်အပြင်ကလူတွေ သိပ်သိပ် စိတ်ဝင်တစား ဘာဖြစ်မလဲ..ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီး သိချင်နေကြတာမို့ပါ။ ဖုံးဝင်လာတာချည်း ဒီမနက်မှာတင် ၆ခါရှိနေပြီ။ မီဒီယာ လုပ်ရတာ အသက်တိုပါတယ်..။
အနိစ္စ။ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ …
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အရေးပေါ်ကြေငြာချက်တရပ်ကို မဲဆန္ဒပေးပွဲမစခင် မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကြက်ဖွတ်ပါတီရဲ့ သင်္ကေတကို ကြိုတင်မဲလို့ ပြောင်းလိုက်ပြီး နောက်ထပ်ပါတီတခု အသစ်ထပ်တိုးပါတယ်။ အဲဒီပါတီကတော့ ကြောင်ကြီးပါတီဗမာပြည်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သင်္ကေတကတော့ ပယ်မဲဖြစ်ပါတယ်။ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဟေ့ ကြံဖွတ်တွေ မင်းတို့လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မင်းတို့ဘဲနိုင်ရင် အောင်ပွဲတွေဘာတွေ စောက်ရှက်မရှိ ထူးထူးထွေထွေ ခံမနေနဲ့။ မင်းတို့ စောက်ရှက်မရှိမှန်း အားလုံးသိတယ်။ လူညစ်တွေ။ သမိုင်းမှာ တွင်ကျန်ရစ်မဲ့ လူညစ် စောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေ။